ACT परीक्षाको लागि शीर्ष 15 सुझावहरू
ACT ले तपाइँलाई तल पार्यो? जब तपाईं आफैलाई यस बहु-छनौट परीक्षाको लागि परीक्षण केन्द्रमा तान्नु भएको बेला तपाईंको स्टोरमा के हो भन्ने बारे डरलाग्दो डरलाग्दो छ ? खैर, बटन माथि। निम्न ACT सुझावहरू तपाईंलाई एक बेहतर कार्य स्कोर प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसोभए यी खराब केटाहरू याद गर्नुहोस्, ठीक छ?
कुनै धोखा पानाहरू अनुमति छैन।
शीर्ष 15 अधिसूचना युक्तिहरू
प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्
हो, कठोर पनि। तपाईं अनुमान लगाउन को लागी दण्डित हुने छैन यदि तपाईं पुरानो एसएटी परीक्षण लिनुभयो भने।
रेकर्डको लागि, पुनःस्थापित एसएटी परीक्षा , जुन पहिलो मार्च 2016 मा व्यवस्थापन गरिएको थियो, अब वा गलत जवाफहरूको लागि दण्डित गर्दैन।
गुजारा गर्नु अघि POE प्रयोग गर्नुहोस्
POE उन्मूलनको प्रक्रिया हो । प्रत्येक प्रश्न कम्तीमा एउटा जवाफ हुनेछ जुन त्यहाँको बाटो हो। शारीरिक रूपमा त्यस जवाफलाई पार गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसको प्रयोग गर्न प्रलोभन हुने छैन, र तपाईं सही अनुमान लगाउने आफ्नो बाधाहरू उठाउनुहुनेछ। त्यसपछि फिर्ता जानुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईं कम से कम एक र बढी पार गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुवात सुरुवात गर्नुहोस्
पहिलो सजिलो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, त्यसपछि कठिन व्यक्तिहरूमा जानुहोस्। लामो, अधिक कठिन प्रश्नहरू सजिलो सवाल भन्दा बढी बिन्दुहरूको लायक छैन। त्यसोभए सबै अंकहरू जुन तपाईं जित्न सक्नु हुन्छ छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
परीक्षणको क्रममा, तपाईंले निर्देशनहरू पढ्न अतिरिक्त समय पाउनुहुने छैन, यसैले यदि तपाईले के गर्न सक्नु भएको छ भने5मिनेट लाग्छ भने, यसले पाँचवटा मिनेटमा अंकहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
जवाफ पानामा, त्यो हो। ACT एक मेशिन द्वारा वर्गीकृत गरिएको छ; यदि तपाइँको चिकन खरिद पढ्ने तंत्र संग हस्तक्षेप गर्दछ भने, तपाईं बिन्दुहरूमा छुट्न सक्नुहुनेछ।
ओल्लहरूको पाना सम्भव छ जस्तो सफा राख्नुहोस्।
पूर्ण रूपमा मेट्नुहोस्
दुई मेट्रोहरू ल्याउनुहोस्: एक भारी शुल्कले मेटाउनको लागी तपाईंलाई गर्न आवश्यक छ र अर्को सफ्ट ईजरलाई पूर्णतया तपाईँका ओभरहरू मिलाउन सक्दछ। तपाईं चाहानुहुन्छ अंकहरू तपाईंको जवाफहरू चल्दैछन् र तपाईं अंकहरू गुमाउने कारणहरू मेटाउनुहोस्।
केहि परीक्षण सेक्शनहरूमा, तपाइँसँग प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिन कम्तिमा कम्तिमा 30 सेकेन्ड हुनेछ, त्यसैले यो ध्यान राख्नुहोस्।
तीन मिनेट बित्तिकै अन्तरिक्षमा घिमिरे वा लामो यात्राको पुनरावृद्धि गर्न; ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्।
पुरातन, हो, तपाईको सेल फोन र सबैसँग के छ, तर जब देखि तपाईं आफ्नो सेल फोन तपाईंसँग सक्षम हुनुहुन्न, एक घड़ी ल्याउनुहोस्। कुनै ग्यारेन्टी छैन तपाईं काम गर्ने घडीको साथ कोठामा परीक्षण गरिनेछ।
यदि जवाफ धेरै सजिलो देखिन्छ भने, यो हुन सक्छ। प्रत्येक जवाफ छनौट पढ्न र सबै भन्दा राम्रो उत्तर चयन गर्ने निश्चित हुनुहोस्। स्पष्ट छनौट एक विचलित हुन सक्छ।
यदि तपाईँले प्रश्न 18 को लागि बी चिन्ह गर्नुभयो भने शायद यसको लागि एक राम्रो कारण थियो, त्यसो भए पछि नजानुहोस् र यसलाई परिवर्तन नगर्नुहोला, जबसम्म तपाइँले तपाइँको सिद्ध सिद्धान्तलाई निरुत्साहित गर्न परीक्षाको पछिल्ला भागमा जानकारी पाएनन्। तथ्याङ्कहरू साबित हुन्छन् कि तपाईंको पहिलो अनुमान सामान्यतया सर्वश्रेष्ठ हो।
यदि तपाइँ दुई जवाफ छनौटहरू बीचको अचम्म हुन्छ भने, प्रश्न सर्कल गर्नुहोस् र तपाइँका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि ताजा आँखाका साथ फेरि फर्कनुहोस्। सम्झनुहोस्, तपाईंले आफैलाई गति दिनुपर्छ।
प्रत्येक पाँच प्रश्न वा यसैले, तपाईको जवाफ पाना जाँच गर्नुहोस् कि तपाईले एउटा ओवल छोड्नु भएको छैन। टेस्टको अन्त्यमा प्राप्त गर्नु भन्दा पनि कुनै पनि चीज छैन र तपाईलाई अण्डामा भरिएको छुट्याउने र सबै कुरा मेटाउन मिल्दैन।
आफ्नै आफ्नै क्यालेन्डर ल्याउनुहोस्
परीक्षण केन्द्र तपाईंलाई एक साथ प्रदान गर्दैन, यसैले सजिलो गणित कार्यको लागी अनुमोदित क्यालेन्डर ले। (सबै प्रश्नहरू बिना जवाफ दिन सकिन्छ, तर जसरी पनि ल्याउनुहोस्।)
लेखन गर्नु अघि आउटलाइन
यदि तपाईं निबन्ध भइरहनुभएको छ भने , 40 मिनेटबाट पाँच मिनेट लिन र योजना गर्नु अघि योजना लिन निश्चित हुनुहोस्। यो समय बर्बाद छैन; स्कोरर राम्रो तरिकाले संगठित निबन्ध खोज्दै हुनुहुन्छ। एक प्राप्त गर्न सबैभन्दा राम्रो तरिका हो कि एक रूपरेखा वा ग्राफिक आयोजक संग अगाडी बढावा योजना हो।
तपाईंले पहिले यो सुन्नुभयो, तर यो साँच्चै सत्य हो। एउटा ACT prep पुस्तक किन्नुहोस्, र यसमा प्रत्येक प्रश्न सोध्नुहोस्। तपाईं विश्वास गरेर धेरै गरेर अतिरिक्त अंक पाउनुहुनेछ।
यी 15 सुझावहरू तपाईं ACT लाई लिँदा केवल जीवनशैली हुन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू सबै पछ्याउन निश्चित हुनुहोस्।
टेस्ट दिनहरूमा कसरी तपाईंको छोराछोरीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ?
बहुविध परीक्षण परीक्षण रणनीतिहरू
यो कार्यपत्रको साथ तपाईंको इन्टरफेसिंग कुशलता अभ्यास गर्नुहोस्
प्राथमिकता: एक आलोचनात्मक आकलन
मुख्य आइडिया कार्यशीलता र अभ्यास पत्ता लगाउनुहोस्
कसरी लेखकको उद्देश्य पत्ता लगाउनुहोस्
2018 मा किन्नुहोस् 8 उत्तम एसएटी / एक्टिटी अनलाइन ट्यूटोरियल सेवा
2015 मा कलेज विद्यार्थीहरुको लागि शीर्ष 10 गिफ्ट
ओर्विन राइटको जीवनी
दस वर्षको अपशिष्ट पोर्क बैरल खर्च
सबै समयका 10 उत्तम मस्तङ्गहरू
गोताहरू कहाँबाट आयो?
जंगली संसार तान्त्रिक
स्नोबोर्डिंगको लागि तपाईंको ब्यालेन्सलाई सुधार गर्न 8 तरिका
दुर्लभ पृथ्वी संक्षेप
10 क्रोमियम तथ्यहरू
कसरी पहेंलो र गियरको लागि चढाई गियर जाँच गर्नुहोस्
एक बिरानोम विधानसभा भनेको के हो र अमेरिकाले के हो?
बाइबल एन्जिल्स र चमत्कारहरू: बिलामको गधा बोल्दै
शीर्ष हेलोवीन डरावनी फिल्महरू
सेन्ट मैरीको कलेज इंडियाना जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
जापानी, महिना, र जापानमा मौसमहरू कसरी भन्न सकिन्छ
घरबाट मेलहरू, लोकप्रिय योजनाहरूको लागि एक गाइड
शीर्ष5शुरुवात Clarinet विधि किताबहरु को लागि किताबहरु
"हे टैननबामम" गीतमा अङ्ग्रेजी र जर्मन
क्या तपाईं उन Presta वाल्व पागल को आवश्यकता हो?
कसरी आराम गर्न र तपाईंको शरीरलाई आधार बनाउनुहोस्
स्यान्डोवल - नाम र मूल नाम
गुगल धरती र पुरातत्व
बर्लिन एयरलाइफ्ट र ठण्डा युद्धमा अवरुद्ध
कन्टैंटिनो ग्रेटका चित्रहरू, रोमको सम्राट